/ Products / Galmada Dhiirrigelinta Hormoonnada
Heerarka dumarka ee estrogen, progesterone, iyo testosterone ayaa si dabiici ah hoos ugu dhaca da'da, gaar ahaan xilliga dhalmada iyo kadib. Soo ogow dariiqooyinka aad galmadaada ku ilaalin karto, xitaa heerarka hoormoonkaagu hoos ayuu u dhacayaa. Iyo, ragga qaarkood, oo ay weheliyaan da'da, kacsiga jinsiga ayaa hoos udhaca. Iyo, gaar ahaan, ragga qaar waxay qabaan dhibaato aan caadi aheyn oo kacsi leh. Si aad u isticmaasho daawooyinka xoojiya galmada, ka caawi inay ku raaxaystaan ​​nolosha, ama nolosha galmada ka wanaagsan.
Dhibaato kacsi marba marka ka dambeysa daruuri maahan sabab walaac. Haddii cillad aan caadi ahayn ay tahay arrin socota, hase yeeshe, waxay sababi kartaa walwal, waxay saameyn ku yeelan kartaa isku kalsoonaantaada waxayna gacan ka geysan kartaa dhibaatooyinka xiriirka. Dhibaatooyinka helitaanka ama xajinta kacsiga waxay sidoo kale calaamad u noqon kartaa xaalad caafimaad oo salka ku haysa oo u baahan daaweyn iyo qatar u ah cudurada wadnaha.
daawooyinka loo yaqaan "nitrates" kuwaas oo badanaa loo qoro xanuunka feedhaha